Wikipedia:Ma Ogtahay - Gpedia, Your Encyclopedia
Ma ogtahay waa mashruc loo sameeyey in ay dadku aqristaan macluumaadka ku jira kaasoo lagu soo bandhigo Bogga Hore maqaallo la isleeyahay waa fiicanyihiin ama waa umihim, sidoo kale waxay dhiiri galinaysaa hormarinta maqaalka si wax loogu kordhiyo ama wax looga saxo hadii ay jiraan wax qalad ah.
Fadlan ku dar wixii aad isleedahay waa mihiim si looga faaiideeysto, xusuusnoow in laguugu kalsoonaan doono sababtoo ah mashruucaan waxaa lagu soo bandhigayaa Bogga Hore.
Xusuusnoow inaad qorto maqaalka ciwaankiisa oo kaliya adigoo raacinayaa qoraal yar oo gaaban.
Bogga hore maqaalada ma ogtahay waxaa laga dhigay mid bil ah maxaayeelay lama heli karo ilaa iyo hadda maqaal maalinle ah sababtoo ah waxuu ubaahanyahay dadaal farabadan.
Hadii aad fakkar hayso waxaad ku sheegi kartaa halkaan.
Qaabkaan ayaad u qoraysaa macluumaadka:
2 Macluumaadka hadda la soo bandhigay
4 Soo jeedin macluumaad
Atom, Atomku waa wax yer oo ilmaqabata ah, waana qayb ka tirsan Maatarka waxaan ognahay in uu yahay maatarka wixii cufleh culaysnaleh meelmadhana buuxin kara.
Maroodiga waa xaywaanka kaliya ee leh afar qoob.
Macluumaadka hadda la soo bandhigay
Liiska mashruuca ma ogtahay Midda gacanta lagu soo bandhigay.
Waxaa lagama maarmaan ah macluumaadka la doonayo in lagu dro laga helo shuruudahaan soo socda:
Hubinta inta aadan soo gudbin codsi kasta ee la xiriira macluumaad soo jeedin cusub in ayasan noqon wax lagu soo celceliyay adigoo dib uga eegaya Liiska guud ee horay loo baahiyay.
Waa in ayasan dhicin in loo xulo maqaallo aan ku habboonayn, sida in ay gaabantahay, ama laga shakisanyahay, ama ay tahay qar-iskatuur.
Ka fogaanshaha macluumaadka lala yaabo inta la awoodo, sababtoo ah wikipedia waa insakolobediya ogaansho mana ahan waxyaabaha lala yaabo meel lagu qoro.
Macluumaadku waa in uu ahaadaa wax ku jira maqaal lahubo ee ku jiro maqaal la hubo xogo lagu kalsoonyahay.
Uqor Ogaalka hab su'aal ah.
Kana fogoow macluumaadka caadiga ah ee soo noqnoqota; Tusaale: «Ma ogtahay in Muqdisho ay tahay magaalo ku taal Soomaaliya, ahana gobolka «Banaadir». raacsan maamul ahaan «Banaadir State». qiyaastii ay gaarayaan dadka deggan 3,173,575 qof (2018).».
Soo gaabi, macluumaadka hore tusaale ahaan waa ay dhib badantahay in uu xusuusnaado aqriyaha sababtoo ah macluumaadka ku jira oo badan awgeed.
Ka billoow weedha saddex «...» kaddibna ereyga «in» ama wax kale hadaba sida ay tahay weedha.
Soo jeedin macluumaad
halkaan baad ku soo gudbin kartaa Gpedia:Ma Ogtahay/Soo jeedin macluumaad haddii loo arko in ay wanaagsantahay waa la soo bandhigi doonaa.
Guji halkaan soo jeedinta macluumaadka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gpedia:Ma_Ogtahay&oldid=196528"
Mashruuca ma ogtahay